कला & डिजाइन
समाचार & Magazines
घर › एपहरू › Archive by Category "Alat"
BehApk - नि: शुल्क एपीके एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस् - © सबै अधिकार सुरक्षित
हामी हाम्रो वेबसाइटमा कुकीहरू प्रयोग गर्छौं ताकि तपाइँ तपाइँको प्राथमिकताहरू र दोहोर्याइएको भ्रमणहरू सम्झेर तपाइँलाई सबैभन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिन सक्नुहुन्छ।. "स्वीकार गर्नुहोस्" क्लिक गरेर, तपाईं सबै कुकीहरू प्रयोग गर्न सहमत हुनुहुन्छ.
मेरो व्यक्तिगत जानकारी बिक्री नगर्नुहोस्.
कुकी सेटिङहरूस्वीकार गर्नुहोस्
सहमति व्यवस्थापन गर्नुहोस्
यस वेबसाइटले तपाइँको वेबसाइट मार्फत नेभिगेट गर्दा तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ. यी मध्येबाट, आवश्यक रूपमा वर्गीकृत गरिएका कुकीहरू तपाइँको ब्राउजरमा भण्डारण गरिएका छन् किनभने तिनीहरू वेबसाइटको आधारभूत कार्यक्षमताहरूको कामका लागि आवश्यक छन्।. हामी तेस्रो-पक्ष कुकीहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले हामीलाई विश्लेषण गर्न र तपाईंले यो वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ. यी कुकीहरू तपाईको सहमतिमा मात्र तपाईको ब्राउजरमा भण्डारण हुनेछन्. तपाईंसँग यी कुकीहरू अप्ट-आउट गर्ने विकल्प पनि छ. तर यी कुकीहरू मध्ये केही अप्ट आउट गर्दा तपाईंको ब्राउजिङ अनुभवलाई असर गर्न सक्छ.
वेबसाइटलाई राम्ररी काम गर्नका लागि आवश्यक कुकीहरू एकदमै आवश्यक छन्. यी कुकीहरूले वेबसाइटको आधारभूत कार्यक्षमता र सुरक्षा सुविधाहरू सुनिश्चित गर्छन्, गुमनाम रूपमा.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको हो. कुकी वर्गमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ "विश्लेषण".
cookielawinfo-चेकबक्स-कार्यात्मक 11 महिना कुकीहरू वर्गमा रहेका कुकीहरूका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न GDPR कुकीको सहमतिद्वारा सेट गरिएको हो "कार्यात्मक".
cookielawinfo-चेकबक्स-आवश्यक 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको हो. कुकीहरू वर्गमा कुकीहरूका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ "आवश्यक".
cookielawinfo-चेकबक्स-अन्य 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको हो. कुकी वर्गमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ "अन्य.
cookielawinfo-चेकबक्स-प्रदर्शन 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको हो. कुकी वर्गमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ "प्रदर्शन".
हेरिएको_कुकी_नीति 11 महिना कुकीलाई GDPR कुकी कन्सेन्ट प्लगइनद्वारा सेट गरिएको छ र प्रयोगकर्ताले कुकीहरूको प्रयोगमा सहमति जनाएका छन् वा छैनन् भनी भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।. यसले कुनै पनि व्यक्तिगत डाटा भण्डार गर्दैन.
कार्यात्मक कुकीहरूले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा वेबसाइटको सामग्री साझा गर्ने जस्ता निश्चित कार्यहरू गर्न मद्दत गर्दछ, प्रतिक्रिया सङ्कलन, र अन्य तेस्रो-पक्ष सुविधाहरू.
प्रदर्शन कुकीहरू वेबसाइटको मुख्य कार्यसम्पादन अनुक्रमणिकाहरू बुझ्न र विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले आगन्तुकहरूलाई राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।.
आगन्तुकहरूले वेबसाइटसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भनेर बुझ्न विश्लेषणात्मक कुकीहरू प्रयोग गरिन्छ. यी कुकीहरूले आगन्तुकहरूको संख्या मेट्रिक्समा जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ, बाउन्स दर, ट्राफिक स्रोत, आदि.
विज्ञापन कुकीहरू आगन्तुकहरूलाई सान्दर्भिक विज्ञापनहरू र मार्केटिङ अभियानहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ. यी कुकीहरूले वेबसाइटहरूमा आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्छन् र अनुकूलित विज्ञापनहरू प्रदान गर्न जानकारी सङ्कलन गर्छन्.
अन्य अवर्गीकृत कुकीहरू ती हुन् जसको विश्लेषण भैरहेको छ र अहिलेसम्म कोटिमा वर्गीकृत गरिएको छैन.